जब कुराहरू सम्झना गर्न तपाईं पूरा एक राम्रो मान्छे पछि एक विषाक्त सम्बन्ध
तपाईं एक अस्पष्ट जागरूकता सधैं खुसी सम्बन्ध मा, तर तपाईं कहिल्यै आफ्नो सफाइ संघ विषाक्त हुन. ती लागि जो छन् पाउन पर्याप्त भाग्यशाली नयाँ रोमान्टिक चासो पछि एक विषाक्त सम्बन्ध, यो एक पुरा विभिन्न अनुभव छ । यहाँ केही कुराहरू छन् गर्ल्स के त्यो पूरा गर्ने राम्रो पुरुष माध्यम जा पछि एक खराब सम्बन्ध छ । त्यो व्यक्ति तपाईं यति विश्वसनीय खेलेको संग, तपाईं तरिकामा तपाईं पहिले लाग्यो विश्वास नलाग्दो छ । पछि तपाईं बाहिर प्राप्त भनेर गाढा गुफा, तपाईं अझै पनि छौं सर्ट को कवर, आफ्नो आँखा किनभने नयाँ ज्योति गरेको बस एक बिट पनि उज्ज्वल छ । तापनि बाटो कुराहरू समाप्त, तपाईं अनुभव एक वास्तविक प्रेम मा, जो छ, यति भन्दा बढी अधिकांश मानिसहरू लागि भन्न सक्छौं आफूलाई । त्यसैले, हुन्छ लागि एक जबकि पछि. यसको पाउन दुर्लभ वास्तविक कुरा मा एक समुद्र को पूर्ण. विशेष गरी पछि, तपाईं बस बाहिर मिल्यो कुरा यति तीव्र छ ।, मलाई-समय तपाईं विचार गर्न आवश्यक कुराहरू बारे एक जबकि लागि छ । यसको छ जस्तै तपाईं जान पूर्ण मा जंगल मा र. बस भन्दा जाने यो आफ्नो टाउको मा. जबकि आफ्नो पूर्व सक्छ गरिएको छ जो एक नष्ट सम्बन्ध अन्ततः, तपाईं शायद छौं भन्दा बढी सजग, आफ्नो गल्ती । शायद तपाईं गरे आफ्नो आवश्यकता संवाद गर्न पर्याप्त छ । टी लाग्छ तपाईं गर्न आवश्यक छ । अर्को समय भन्दा बढी हुन. भएकोले आफ्नो अघिल्लो सम्बन्ध लगभग नष्ट (जोड मा लगभग), तपाईं शायद बस के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईं एक जबकि लागि छ । र एक पटक यो के गर्छ, बस समातेर साढें द्वारा सिङ. मा मारा भनेर तपाईं शायद पत्र मा बाहिर, चुम्बन कि अनियमित गर्ने मान्छे हुन सक्छ भन्दा कान्छो. तिनीहरूलाई केहि योगदान छ । केवल आफैलाई लागि सबै मजा तपाईं सम्झना मा बाहिर पहिले । र सबै भन्दा राम्रो भाग हो । कुनै एक न्याय गर्न सक्छन् तपाईं को लागि यो तिनीहरूले थाह किनभने तपाईं बस मार्फत हिंडे नरक र फिर्ता. मा विषाक्त सम्बन्ध, विशेष गरी नियन्त्रणका व्यक्तिहरूलाई, आफ्नो साथी तपाईं को इंगित गर्न स्पष्ट पागल । (शायद किनभने तिनीहरूले थिए.) सबैभन्दा सामान्य मान्छे, यद्यपि. तिनीहरूले रुचि छैन छौं कि. तिनीहरूले यो सजिलो लिनुहोस्, सोच्छ आफ्नो नयाँ संभावित रोमान्स चासो छ । स्वतन्त्रता रही छौं. स्वीकार अपमान र रही उपेक्षा गरिन्छ । ती दिन हो । वास्तवमा, आफ्नो छैटौं अर्थमा लागि चिन्ह को एक विषाक्त सम्बन्ध गर्नुपर्छ भडक भने यो कहिल्यै हुन्छ फेरि । के सबै भन्दा राम्रो कुरा छ ड्रप गर्न कसैले मा पहिले खेल मा भन्दा पछि छ । त्यो बाटो, तपाईं रही जोगिन कुनै पनि अधिक संलग्न छ । निश्चित, यो चोट सक्छ लागि एक वा दुई दिन, तर एक हप्ता या त पछि, तपाईं.
सबै कुरा हामी सुन्न, एक राय, एक वास्तवमा छ । सबै कुरा हामी देख्न एक दृष्टिकोण छ, यो सत्य हो ।. धेरै मानिसहरू अलमलमा अहम् प्रेम साँचो प्रेम किनभने संलग्न कसैले सजिलै हुन सक्छ रूपमा गलत बुझयो प्रेम अधिक तपाईं एक छोडपत्र माध्यम जा र सोच भने तपाईं हुनेछ कहिल्यै रोक्न निराश महसुस द्वारा यति, कि सबै मा जा रहेको छ. अधिक प्रेम बनाउँछ संसारमा सार्न. प्रेम छ सबैभन्दा खोजे-पछि मानव अनुभव छ । तर विरोधाभास छ, जबकि भनेर हामी आफैलाई प्रेम हो, हामी जान खोजिरहेका मा यो बाहिर.
अधिक आनन्द छ भन्ने कुरा
भित्री शान्ति र धेरै महत्त्वपूर्ण छन् भने तपाईं बाँच्न चाहनुहुन्छ एक आनन्दित स्वस्थ जीवन । के छैन मा पनि गाह्रो हुन, आफैलाई तरिकामा पाउन शान्त गर्न आफ्नो मन र सजिलै तपाईंको फिक्री र निराश. थाले योग र ध्यान मेरो सम्पूर्ण जीवन परिवर्तन भएको छ, यो राम्रो लागि छ । म महसुस बारेमा जहाँ म छु, मेरो जीवन र के मेरो उद्देश्य छ ।
← "को धेरै चटर्जी" - सबै भिडियो च्याट मा एक साइट
महिला, बालिका छन् अद्वितीय क्षेत्र →